रोनाल्डोभन्दा महंगो मूल्यमा कान्टे बेचिदैं ! – Everest Dainik – News from Nepal
रोनाल्डोभन्दा महंगो मूल्यमा कान्टे बेचिदैं !
काठमाडौं, साउन ७ । इङ्लिस क्लब चेल्सीले फ्रेन्च मिडफिल्डर एनगोलो कान्टेलाई ११० मिलियन युरोमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) जान लागेका मिडफिल्डर कान्टेमाथि चेल्सीले ११० मिलियन युरोको प्रस्ताव अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
ट्याग्स: Angelo Kante, एनगोलो कान्टे, रोनाल्डोभन्दा महंगो मूल्यमा कान्टे बेचिदैं !